Espana: Ny Tolon’ny 15 Oktobra Sy Ny Tatitr’ireo Haino Aman-jery · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2011 16:06 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, Português, polski, عربي, Ελληνικά, srpski, Español
Nandritra ny tolona maneran-tany tany amin'ny tanàna 1000 sy firenena 82 tamin'ny 15 Oktobra lasa teo, nivondrona teo ambany teny filamatra iray ny olona “Miombona ho an'ny fanovàna maneran-tany” mba hitaky ny zony sy demokrasia marina. Nitobatobaka tamin'ny aterineto ireo antso amin'ny alalan'ny lahatsary [es] nataon'ireo olom-pirenena an'arivony izay mitsipaka ny politikan'ny sakantsakana ara-sosialy sy ny filavoana lefon'ny governemanta manoloana ny tsena sy ireo orinasa ara-pitantanam-bola
@democraciareal Mieritreritra hijanona ao an-trano ve ianao dia hamaky ny momba izay nitranga ao anaty bokin-tantara? Sa te-handray anjara sy hiaina izany ianao? # yosalgo15O #15Oready.
Raha ny momba an'i Espana manokana, somary lava ihany ny lisitr'ireo toeram-pivoriana, araka ny hita amin'ity sary manaraka ity:
toeram-pivoriana #15O any Espana
Any amin'ireo tanàna voalohany any amin'ny firenena, maro dia maro ireo olona tonga, nahatratra 500 000 tany Madrid ary 350 000 tany Barcelone. Rakotra peta-drindrina, fanehoan-kevitra ary olona tezitra noho ireo lalàna “neolibéral” ny làlan'ireo tanàna voalaza ireo. Samy natao tam-pilaminana ireo fihetsiketsehana ireo ary nampitombo ny fahatsapana fiombonana ho an'ny fanovàna maneran-tany ireo toerana, fiovàna fomba fisainana.
Ny media mpifikitra amin'ny nentin-drazana indrindra any amin'ny firenena, izay nanome vaovao diso tamin'ireo mpamaky hatramin'izay nanombohan'ny hetsika #15O, dia nidina an-dalam-be niaraka tamin'ity pejy fanolorana ity:
pejy fanoloran'ny ABC, 16 Okt. 2011 – “Mankalaza” ny tolony maneran-tany ireo mpitolona tezitra.
Pejy fanoloran'ny El mundo manamaivana ireo fihetsiketsehaa ary milaza fa mahery setra ireo mpitolona.
@MikelSB Vao avy nahita ny pejy fanoloran'ny #ABC aho. Fanendrikendrehana mahatsiravina! Ny fihetsiketsehana #15o iray hany nisy hery setra ihany no nalainy sary.
Ny talen'ny El Mundo [es], Pedro J. Ramírez, dia nanao fanangonan-kevitra tao amin'ny Twitter izay manontany ny toerana tian'ny media mpifikitra amin'ny nentin-drazana omena ny hetsika maneran-tany ho amin'ny fanovàna; na apetrany any amin'ny farany ankavia ny 15M, na lazainy fa mahery setra, na tena manao tsinontsinona tanteraka ireo olona an'arivony nidina an-dalam-be.
@pedroj_ramirez Inona no eritreretinao? a) hiteraka antoko vaovao miandany miankavia ny 15M. b) hiteraka hery setra manohitra an'i Rajoy ny 15M. c) hitohy ho fialamboly sy tsy matotra ny 15M
Ny pejy fanoloran'ny La Razón dia tsy nanasondagina ireo tolom-bahoaka.
Araka ny hita ao amin'ireo pejy fanolorana ny ampitson'iny, 16 Oktobra [es], tsy ny gazety rehetra no mitovy lohateny lehibe na manivana ny vaovao araka izay azony atao, tahaka ireo notanisaina tetsy aloha.